Tonga soa ny GVO dika teny Alemana, Albaniana ary Masedoniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2008 16:54 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, বাংলা, Español, Shqip, English
Faly dia faly ny Global Voices Lingua milaza aminareo anio fa misokatra amin'ny fomba ofisialy anio ny teny Alemana, Albaniana ary Masedoniana. Pejy vaovao indray no misokatra anio.
Ankehitriny moa dia efa voadika amin'ny teny 12 ny Global Voices (Lingua). Tsy ampy tokoa izany mazava loatra! Mbola maro ny teny hafa tsy mbola tafiditra ao amin'ny Lingua aloha, saingy efa mizotra ho amin'izany isika ankehitriny. Ho avy koa ny amin'ny fiteny hafa. Avia miaraka aminay!Raha toa ka liana ihany koa ianao amin'ny fampiroboroboana, dia miangavy anao izahay hitsidika ny Takelaky ny Lingua ho amin'ny fanazavana bebe kokoa sy hahitanao ny adiresim-pifandraisana.
Tantaran'ny Malagasy farany
03 Oktobra 2018Afrika Mainty
28 Septambra 2018Madagasikara
23 Septambra 2018Madagasikara
Tsara laizana eto angamba na dia otrany oe midokatena fa Alemana toe aloha ny GVO amin’ny teny malagasy no natomboka fa kosa GVO Malagasy no navitrika kokoa ( misotra anareo e !) dia tsika no nasongadona amin’ny pejy lingua :).
19 Marsa 2008, 21:15